တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Internet Download Manager သုံးမရဖြစ်နေရင် ဖြေရှင်းနည်း [1000000% Working]
Internet Download Manager သုံးမရဖြစ်နေရင် ဖြေရှင်းနည်း [1000000% Working]
Internet Download Manager 6.15 build9Full Cracked !!! No need serial, No need crack .
What's new in version 6.15 build9?
IDM ချည်းပဲ ခဏ ခဏ ရှင်းနေရလို့ New User တွေအတွက် လွယ်တာလေး နှစ်ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်....။ ဒီလောက်လွယ်တာတော့ အခြားမှာ မတွေ့ရသေးပါဘူး ဒါအလွယ်ဆုံးနည်းပါ...:)
New User တွေ အဖြစ်များတဲ့ IDM ပြဿနာလေးကတော့ အင်တာနက်ထဲကနေ IDM ကို 30-day trial version ကိုဒေါင်းယူပြီး သုံးတတ်ကြပါတယ်... ရက် ၃၀ ပြည့်တဲ့အခါ IDM က အလုပ် မလုပ်တော့ပါဘူး... ဒါမှမဟုတ် IDM က တစ်လမှာ အနည်းဆုံး နှစ်ကြိမ်လောက် Update ထွက်တတ်ပါတယ် .. အဲ့ဒီအခါ IDM ကို Update လုပ်ပေးမိရင်လည်း IDM ကသုံးမရတော့ပြန်ပါဘူး Serial Key ထည့်ပါ (သို့) ၀ယ်ပါဆိုပြီး အတင်ခိုင်းပါတော့တယ်..... အဲ့ဒီအတိုင်း Trial ရက်ကုန်ဆုံးသွားလို့ ဖြစ်စေ Update လုပ်ပေးမိလို့ Serial Key တောင်းနေလို့ဖြစ်စေ IDM က လုံးဝ သုံးမရဖြစ်နေရင်.... အောက်က နည်းလမ်း အတိုင်းသာ လုပ်ပေးလိုက်ပါ....
(IDM မရှိသေးသူများကတော့ မူရင်းဆိုက်ဒ်ကနေ Update ဖြစ်နေတဲ့ နောက်ဆုံး Version ကို ဒီနေရာကတဆင့် >>> IDM Trial Version <<< ဒေါင်းယူပါ...Next အဆင့်ဆင့်နဲ့ Install လုပ်ပါ... Finish ကိုနှိပ်ပါ... Serial Key တောင်းတဲ့ Box လေးတွေတတ်လာရင် ပိတ်ပစ်ပါ... IDM ကို မ Run ပါနဲ့ဦး Run နေရင် ကွန်ပြူတာရဲ့ ညာဘက်ထောင့်နားက Tray Icon ထဲမှာ IDM Logo လေးပေါ်ကို Right Click > Exit ပေးလိုက်ပါ .....
ပြီးမှ ဒီအောက်က Patch ဖိုင်လ်လေးကို ဒေါင်းယူပါ... Rar ဖိုင်လ်လေးကို ဖြည်ပြီး UniPatch 2.7.exe ဆိုတဲ့ exe လေးကို Double Click နဲ့ Run ပေးပါ ... ခဏစောင့်ပါ... ကျန်တာတွေကိုတော့ အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်း တစ်ဆင်ချင်း လုပ်ပေးလိုက်ရင် Full Version အဖြစ်နဲ့ အမြဲတမ်း သုံးလို့ရသွားပါပြီ...)
(အရေးကြီးဆုံးအချက်ကလေးတွေကတော့ ဒီအောက်က Patch လေးကို မ Run ခင် IDM ကို Exit ပေးထားပါ..... ပြီးတော့ Patch,Crack တို့ကို တချို့ Antivirus တွေက Virus အဖြစ် သတ်မှတ်တတ်ပါတယ်.. Patch,Crack တွေ ဖွင့်မရဖြစ်နေရင်တော့ Antivirus ကို ခဏ Disable ပေးထားဖို့ လိုအပ်မှာပါ... )
Download IDM Patch Here
အပေါ်က Download Link ကိုနှိပ်ပြီး Patch ဖိုင်လ် လေးကို ဒေါင်းယူလိုက်ပါ 300KB ကျော်လေးပဲရှိပါတယ်..။
(ဒီ ၀က်ဆိုက်ဒ်က Software တွေ မဒေါင်းတတ်ဘူးဆိုရင် ဒီ Video လေးကို ကြည့်ပေးပါ )
UniPatch 2.7.exe ဆိုတဲ့ exe ဖိုင်လ်လေးကို Double Click နဲ့ Run လိုက်ပါ..
ခဏနေရင် အောက်ကပုံလေး အတိုင်း box လေးတစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...
Patch ကို နှိပ်ပါ...။
နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ အနီရောင် အကွက်လေးမှာ မိမိနာမည်ဖြစ်စေ (သို့) ကြိုက်တဲ့
စာလုံး ဖြစ်စေ တစ်ခုခု ရေးထည့်ပေးပြီး... အစိမ်းရောင်နဲ့ ပြထားတဲ့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင် IDM ကို Full Version အဖြစ် အမြဲတမ်းသုံးလို့
နောက်တခါ IDM အလုပ် မလုပ်တော့ရင် (သို့) Update လုပ်ပေးလိုက်မိလို့ Serial Key တောင်းနေရင် (သို့) သုံးမရဖြစ်နေရင် အဲ့ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းသာ လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ 1000000% လုံးဝ အဆင်ပြေပါတယ်..... :D
IDM နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး Uninstall လုပ်မရ (ထုတ်မရ) Install လုပ်မရ (သွင်းမရ) ဖြစ်နေတာကို ဒီပို့စ်မှာ ဖတ်ပေးပါ...။ (လုံးဝ အဆင်ပြေသွားစေရပါ့မယ်)
နောက်တစ်ခုက IDM ကို Update လုပ်မိရင်း Serial Key တောင်းနေလို့ ဒေါင်းမရဖြစ်နေရင် (သုံးမရဖြစ်နေရင်) ဒီပို့စ်မှာ ဖတ်ပေးပါ...။ (လုံးဝ အဆင်ပြေသွားစေရပါ့မယ်)
IDM ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Update Version တွေ လိုအပ်ခဲ့ရင်တော့ ဒီ Label မှာ Vresion မျိုးစုံ ရနိုင်ပါတယ်..။ (လုံးဝ အဆင်ပြေသွားစေရပါ့မယ်)
အဆင်မပြေသေးရင် ဒီ Video လေးကို ကြည့်ပြီး လုပ်ပေးလိုက်ပါခင်မျာ....Video က ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေရင် (မကြည် မလင် ဖြစ်နေရင်) ပုံထဲကလို စက်သွားဝိုင်းလေး နှိပ်ပြီး 480p နဲ့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်...
ဒါကတော့ နောက်တစ်မျိုးပါ .. ဒီ Website မှာ တင်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ (Just Double Click to Install) လေးပါ... ဘာ Serial Key ဘာ Crack,Patch တွေမှ မလိုပါဘူး....အပ်ါကလို Patch တွေ Crack တွေ သုံးနေစရာမလိုပါဘူး....
အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ စက်ထဲမှာ အရင်ကရှိနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Uninstall လုပ်ချင်လည်း လုပ် မလုပ်ချင်ရင်လဲ ရပါတယ် Error တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ Uninstall လုပ်ပေးပါ.... စက်ကို Restare ချပါ idman615b11.exe ဖိုင်လ်လေးကို Run ပေးပြီး ထုံးစံအတိုင်း Next အဆင့်ဆင့်နဲ့ Install ပေးလိုက်ရုံနဲ့ Full Version အဖြစ် အမြဲတမ်းသုံးလို့ ရသွားစေမှာပါ...။
တကယ်လို့ IDM ကို လိုအပ်လို့ Uninstall လုပ်မယ်ဆိုရင်
ပထမဆုံး Start >> All Programs ကနေတဆင့် အရင်စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ပါ.. (ဒီ Revo Uninstaller Software လေးနဲ့ ထုတ်ပစ်လည်း ရပါတယ်)
အောက်ကပုံလေးအတိုင်း Full ကိုရွေးပေးပြီး Next အဆင့်ဆင့် နဲ့ စက်ထဲကနေ ထုတ်ပစ်လိုက်ပါ.... OK ကိုနှိပ်ပြီး စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ ...။
(ပိုပြီး သေချာစေချင်ရင်တော့ Restart ချပြီး Window ပြန်တတ်လာရင် Ccleaner နဲ့ ရှင်းပေးလိုက်ပါ) မရှင်းချင်ရင်လဲရပါတယ်..။
ဒေါင်းယူထားတဲ့ idm615b11.exe လေးကို Double Click နဲ့ Run လိုက်ပါ ...
Next အဆင့်ဆင့် နှိပ်ပြီး Install ပေးလိုက်ပါ... Finish နှိပ်လိုက်ရင် Desktop ပေါ်မှာ IDM Logo လေးရောက်လာမှာပါ ... အဲ့ဒီ IDM လေးကို Click ပြီး သုံးနိုင်ပါပြီ.... ဘာ Key ဘာ Email မှ ထည့်ပေးစရာ မလိုတော့ပါဘူး....:)
Posted by အောင်မျိုး at 10:35 PM